महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध, "सञ्चालन बजेट"
यसलाई स्पष्ट भए जब "Blitzkrieg" (बिजुली युद्ध पूर्वी फ्रंट योजनामा संकुचन) भनेर र एक लामो युद्धमा हुनेछ, हिटलर स्वयम्ले रूसीहरूले जुन 1942 मा प्रार्य गठन तेल क्षेत्रहरु को खर्च मा इन्धन स्टक Replenish मौका वंचित गर्न Wehrmacht सेना को कार्य सेट थियो। त्यसैले, जर्मन हावा शक्ति र लाल सेना को Armored वाहन रगत गर्न खोजे। यो कार्यक्रम को रूपरेखा मा प्रदर्शन थियो काकेशस को कब्जा तिनीहरूले कोड-नाम "सञ्चालन बजेट" छ। छोटकरीमा यस कार्यका सबैभन्दा र किन नाजीहरूले यसलाई पूरा गर्न सकेनौं बारेमा, यस लेखमा भन्नुभयो गरिनेछ।
जर्मन आदेश को योजना
सेट कार्य Fuhrer, सेना समूह "एक" लाग्यौं सामान्य क्षेत्र मार्शल विल्हेम पात पूरा गर्न, थियो पश्चिम प्रार्य गठन रिज बाइपास र Tuapse मा Novorossiisk हडताल कब्जा, एक ठूलो तेल क्षेत्र को केन्द्र हो। Fedor वन Bock - को रिज को पूर्व पक्षमा ग्रोजनी र बाकु कब्जा गर्न नै समय मा क्षेत्र मार्शल को आदेश अन्तर्गत अन्य सारियो सेना समूह "बी"।
आक्रामक भएको प्रार्य गठन क्षेत्रहरू दुई तेल कम्पनीहरु स्थापित थिए सञ्चालन उद्देश्य साथ जर्मनी मा सुरु पनि अघि, यो 99 वर्ष अवधिका लागि एक विशेष सही पाए। साथै, उच्च आदेश जर्मन उद्योग लागि चासो क्षेत्रमा सबै विस्फोट रोक्न आदेश भएको थियो। जर्मन द्वारा कब्जा सबै वस्तुहरु को रक्षा पहिले एसएस सेना संग चार्ज र सामान्य Krasnov को डन Cossacks को शत्रु एकाइहरु गर्न दोषपूर्ण थियो।
सञ्चालन "बजेट" सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कार्यहरू को समाधान उद्देश्य थियो पछि, त्यसपछि यसको कार्यान्वयन भारी सेना पठाइयो, 168 हजार। सैनिक र Wehrmacht को अधिकारीहरु र 1.5 भन्दा बढी हजार। ट्यांक समावेश छ। साथै, सँगै काकेशस मा सैन्य संग बारेमा 14 हजार। तेल विशेषज्ञहरु पठाइएको थियो।
विभाजन हाइल्यान्ड Fusiliers
को "बजेट" पछि - त्यसपछि जर्मन यसको सफल कार्यान्वयन लागि काकेशस पहाड दायराको क्षेत्रमा सञ्चालन भएको थियो जो सैन्य सञ्चालन, क्षेत्र प्राकृतिक सुविधाहरू देखि अधिकतम लाभ उठाउन खोजे। यसको निपटान पहाड प्रभाग, दक्षिणी Bavaria को पहाडी क्षेत्रहरु को आदिवासी मान्छे, साथै sportsmen-आरोहीहरूको द्वारा staffed मा भएको आदेश अभिप्रेत सञ्चालनको प्रदर्शन मा एक प्रमुख भूमिका यो काम तोकिएको छ।
पनि, खैर, "बजेट", क्षेत्र मा तोडने भनिन्छ, आदेश थियो यो विभाजन को units असुरक्षित Elbrus पहाड पास रहेका, जसले सेना समूह "एक" को अग्रिम बन्द गर्न खोज्दा सोभियत एकाइहरु को पछिल्लो थिच्नुहोस्। यसरी रातो इरादा को प्राविधिक जटिल युद्घाभ्यास अनपेक्षित धक्का कारण र जसबाट आफै अग्रसर।
Elbrus मा Swastika
को Wehrmacht को मुख्य सेना को संक्रमण तयार looms, 90 मान्छे को शामिल प्रत्येक जो, उच्च जमीन मा खडा, अगाडी सारियो र5पहाड प्रभाग मुख, मा dug। तपाईं तिनीहरूलाई मिसिन बन्दुक र पहाड बन्दुक स्थापित छ। जो सेना अपरेसन "बजेट" बाहिर थियो एकाइहरूको कर्मियों, को morale जुटाउने, जर्मन आदेश मा सेट, नाजी झण्डा को उच्चतम अंक सबैतिर गर्न आदेश थियो।
यो क्रम एक Swastika ब्यानरहरू माउन्ट Elbrus को पूर्वी र पश्चिमी चुचुराहरूको मा हल्लाउँदै एउटा विशुद्ध जर्मन pedantry देखि बाहिर थियो, र पहिले नै अगस्ट 21। यो कार्य प्रयास धेरै लिएको र सञ्चालनको मार्गमा ढिलाइ भएको छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, त्यो थिच्नुहोस् Goebbels अब देखि कि घोषणा युरोप को उच्चतम बिन्दु माथि जर्मन झण्डा झिंगा मा, अगाडि पृष्ठ शीर्षकहरू धारण एउटा कारण दिने, ठूलो प्रचार मूल्य थियो।
कमान्डर पहाड डिभिजनका सामान्य Hubert Lanz बर्लिन फिल्म दृश्य पठाइएको माथि, विशेष यस अवसरमा, अपरेटरहरु आइपुगे, र हिटलर कल उसलाई Elbrus शिखर पुन: नामकरण गर्न अग्रसर लिए शट।
सैन्य इतिहासकारहरूले को बहुमत रूपमा, जर्मन झन्डै दुर्गम पहाड ढलान चढ्नु सक्षम थिए सोभियत आदेश को समाचार एक पूर्ण आश्चर्य थियो, र साथै, गोलीबारी अंक को भन्दा माथि मा सेट।
आदेश को बोलपत्र तुरुन्तै तिनीहरूलाई दस्तक गर्न आदेश थियो। तर, यसको कार्यान्वयन मात्र धैर्य गठन एकाइ, पूर्व cavalry Budyonny, मात्र पहाडी क्षेत्रमा, तर सामान्य मा, पनि पैदल, साथै tylovikov देखि युद्धका कुनै अनुभव थियो, जसले, मा राखिएको छैन धेरै जो द्वारा staffed थियो हतियार हातमा।
यो धैर्य गठन एकाइ मात्र होइन यसको आधिकारिक संख्या, तर पनि सैनिकहरू को नाम को सूची थियो। हिजो गरेको महिला hairdresser Grigoryants, को लप्टन अघि छिट्टै उत्पादन - आदेश विशुद्ध नागरिक tasked थियो।
र अझै यसलाई तिनीहरूले तीर छनौट विभाजन "बजेट" संग लडाई मा संलग्न थियो छ। सञ्चालन 1942 को काकेशस कब्जा गर्न अन्धकार र कुहिरो को आड Grigoryants एकाइ, वर्ष को यो समय मा त बारम्बार, Terskol पारित पहाड उचाइ लागि गुलाब गर्दा, सेप्टेम्बर को सुरुमा यसको चरमोत्कर्षलाई पुग्यो। आफ्नो कार्य अचानक शत्रु आक्रमण, उहाँलाई पहिले कब्जा स्थिति गर्न हटाउनुहोस् बनाउन थियो।
योजना को पहिलो भाग पूरा, र एक predetermined चिन्ह गर्न बढ्दो पछि, लाल सेना सैनिकहरु एक महत्वपूर्ण अवस्थामा थिए। बिहान कुहिरो उठाएर, तिनीहरू, खुला mountainside मा रहेको अलिकति कम जर्मन पहाड Shooters लागि एक आदर्श लक्ष्य प्रतिनिधित्व गर्छ। एक मिशन मा सैनिक पठाउने, आदेश पनि आफ्नो आवरण लुकाउनु cloaks सुनिश्चित गर्दैन, र आफ्नो गाढा अंगरखा स्पष्ट सेतो हिउँ विरुद्ध बाहिर उभिए।
नायक चिसो ढलान
हालको अवस्था विश्लेषण, सैन्य इतिहासकारहरूले unanimously कि साहसी लप्टन आफ्नो वर्तमान स्थान देखि जर्मन राहत मात्र छैन, तर पनि जीवित रहन मौका छैन Grigoryants निष्कर्ष गर्न आएका छन्। जाहिर छ, यो आफूलाई लाल सेना बुझे, तर, वास्तविक नायक रूपमा, तर काम छ।
जर्मन सैनिकहरु को संरक्षित पत्र - तिनीहरूले बर्बाद देख्यो के कसरी छक्क कुरा जसमा सञ्चालनको सदस्य, तर सैनिक surrendering छैन, शाब्दिक हरेक मीटर चिसो ढलान लागि लडे। यसलाई त्यागेर गर्न असम्भव थियो, र केवल मृत्यु साहसी रोकियो। यसलाई लेनदेनको आफ्नो अभूतपूर्व साहस predetermined भविष्य पतन "बजेट" छ।
Elbrus मा सोभियत आदेश को क्रम सेप्टेम्बर 1942 को अन्त्यमा सम्पूर्ण को विशेष प्रशिक्षित सैनिकहरू शामिल जो एक विशेष एकाइ, पठाइएको थियो। यी आवश्यक प्रशिक्षण, र व्यावसायिक आरोहीहरूको छ जो NKVD अधिकारीहरु समावेश। तर, पनि आफ्नो सहयोग गर्न सकिएन मुक्त पहाड क्षेत्रमा जर्मन देखि संग।
को "सञ्चालन बजेट" को पतन
तर, यो समयमा युद्ध एक निर्णायक मोड, Stalingrad मा जर्मन सेना को हार परिणामस्वरूप आउँदै थियो। र समयमा विभाजन Paulus अझै पनि प्रतिरोध गर्न जारी हुनत, यो स्पष्ट थियो कि युद्धमा एक foregone निष्कर्षमा नतिजा।
Stalingrad पहाड प्रभाग मा जर्मन हार अनिवार्य घेरिएको छ को मामला मा जस्तै, Wehrmacht कमान्डरहरु को काकेशस को क्षेत्र बाट यसको निकासी लागि आदेश दिए। तसर्थ, अपरेसन "बजेट" सफलतापूर्वक शुरू र व्यापक प्रचार Goebbels मंत्रालय विफलता गरियो।
बेनाम नायक र आफ्नो heroism
यो दुःखी छ, तर लगभग tylovikov र पूर्व budonovtsev देखि गठन मृतक नायक एकाइहरु कुनै एक posthumously पुरस्कार को लागि मनोनीत गरिएको छैन, र कहीं तिनीहरूलाई को स्मृति मा स्मारक erected छन्। यसबाहेक, अज्ञात पनि वर्ण को नाम गर्न, माथि उल्लेख रहेका धैर्य एक कम्पनी भेला रूपमा, छैन केवल सेना संख्या, तर पनि थियो कर्मियों को सूची।
यद्यपि, यी मान्छे को गुण मात्र तिनीहरूको साहस धन्यवाद Elbrus जर्मन सेना मा काकेशस दायरा बाइपास, तिनीहरूलाई गरौं पकड र गर्न व्यवस्थित किनभने, जर्मन सेना "एक" र "बी" को आक्रमणको प्रतिरोध गर्न, सोभियत सेना को रियर मारा, असामान्य ठूलो छ। आफ्नो कमाल सम्पूर्ण महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध सम्मानित थियो heroism Nameless सोभियत सैनिकहरु को धेरै एपिसोडको एक थियो।
गर्भवती र सैन्य कला को नियम अनुसार जर्मन द्वारा बाहिर "सञ्चालन बजेट", सामना प्रतिरोध मान्छे लगनशील भई लागिरहेमा कि वास्तविक मानव क्षमताहरु बाहिर जाओ, र जसको विजय असम्भव थियो।
युद्ध वर्ष को स्मृति
आजकल, घटना मात्र स्मारक सोभियत संघ को होटल (4130 मीटर समुद्र स्तर माथि) मा उच्चतम पहाड छ Elbrus को भग्नावशेष हो, एक पटक "आश्रय एघार" भनिन्छ र 1998 मा तल जलाए। सञ्चालन जर्मन "बजेट" (BOB) द्वारा आयोजित जब अवधिमा therein पहाड प्रभाग Vermahta मुख्यालय।
किनभने लेफ्टिनेन्टस्क्याट Grigoryants को वीर कम्पनी र सामान्य सार्वजनिक तिनीहरूको कमाल को धेरै सानो सजग, यो खाली रूसी फिलिम भर्न निर्णय गरेको छ। 2012 मा, निर्देशकहरू रुस्लान Bozhko Igorem Malahovym र वृत्तचित्र "अपरेसन" बजेट "खिच्नुभयो थियो। पछिल्लो रहस्य। " फिलिम सिक्ने घरेलू र विदेशी को अभिलेख भण्डारण गरिएको सामाग्री, एउटा ठूलो काम गरे।
फिल्म बनाउन कारण सोभियत सैनिक को रहिरहन्छ Elbrus आरोहीहरूको को ढलान यी दिनमा हो झन् बरफ मा संरक्षित पाउन थाले भन्ने तथ्यलाई बारेमा प्रेस देखा थाले। किनभने, आधिकारिक जानकारी अनुसार, महत्वपूर्ण सैन्य कार्यहरू एक क्षेत्र मा बाहिर छैन (सोभियत आदेश आफ्नो miscalculations विचार गर्न चाहनुहुन्छ थिएन), प्रश्न उठ्दा: साँच्चै युद्ध समयमा त्यहाँ के भयो? जो मार्फत अपरेसन "बजेट" द्वारा thwarted र प्रार्य गठन तेल गर्न नाजीहरूले को बाटो मा एक बाधा राख्नु भएको थियो सैनिकहरु को heroism, सजग बन्ने भएकोले।
झण्डा को जब Reichstag भन्दा hoisted? जो Reichstag भन्दा झन्डा उठाएको?
Makhnovshchina - अराजकता वा चोरी छ?
Anton Ivanovich Denikin: संक्षिप्त जीवनी, उपलब्धिहरू
Stalin मृत्यु हुँदा, देश शोकाकुल
कसरी त्रुटि बिना नयाँ नमूनाको पासपोर्ट मा एक प्रश्नावली भर्नका लागि
कसरी "Votsap" पत्राचार पुनर्स्थापना गर्न? WhatsApp अनुप्रयोग
बाथरूम लागि टाइलहरू को गणना - यो महत्त्वपूर्ण सही कुरा के छ
को गर्मी खर्च कसरी आनन्द
जाभाकुसुम चिया: लाभदायक गुण प्रकृति द्वारा bestowed
Vyacheslav Nikitin जीवनी टेलिभिजन क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
को कजाख आधुनिक छोराका नाम। कसरी आफ्नो छोरा नाम?